Robot, Drôna, fiara mizaka tena no hamolavola ny fizahan-tany fa tsy any Jamaika ihany
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Robot, Drôna, fiara mizaka tena no hamolavola ny fizahan-tany fa tsy any Jamaika ihany
Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Minisitry ny fizahantany avy any Jamaika miaraka amin'ny fomba fijery manerantany, ny Hon, Edmund Bartlett dia nizara ny eritreriny momba ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fifandraisan'ny robotika amin'ny tontolo ho avy amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Tsy i Jamaika ihany no hamaly ny chatbots.
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Edmund Bartlett androany dia nanolotra ny teboka niresahany tao amin'ny Konferansa virtoaly isan-taona ao CANTO.
Nanamarika ny minisitra fa tsy isalasalana fa ny fanakorontanana teny rehetra teny nateraky ny valanaretina COVID-19 dia nanampy betsaka tamin'ny fanafainganana ny hafaingan'ny fiovan'ny dizitaly.
Namarana ny teniny i Bartlett: Ny fironana dia manome toromarika ireo orinasam-pizahan-tany rehetra, bitika, bitika, salantsalany ary lehibe, hitady fomba hanaiky ny teknolojia nomerika, ary hampivelatra ny rafitr'izy ireo nomerika na hiatrika ny loza mety hilaozana ao aoriana.
Ny minisitra Bartlett dia nizara ny eritreriny sy ny resaka tao amin'ny CANTO Panel tamin'i eTurboNews:
Manerana an'izao tontolo izao, ny fananganana ny baiko an-trano sy ny asa an-trano, ny fanidiana ny sisin-tany ary ny fepetra henjana lavitra hanalavitra ny areti-mandringana, dia nanimba ny rafitra sy ny fomba nentim-paharazana; niteraka ny ankamaroan'ny hetsika lehibe nataon'ny governemanta, ny varotra ary ny asa nifindra tany amin'ny fantsona nomerika.
Nandritra izany dia niova ny fihevitr'ireo mpanao politika, ny fikambanana ary koa ny olon-tsotra manoloana ny haitao nomerika, avy amin'ny fisalasalana, ny tsy fahazoana antoka ary ny fahaverezan-kevitra ho fanekena mafy fa ny teknolojia nomerika ankehitriny dia mitana vahana lehibe amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena.
Ny zava-dehibe dia nampianatra antsika ny valanaretina fa ny fikambanana izay tsy mampiditra am-pahombiazana ny teknolojia nomerika amin'ny maodelim-pandraharahana dia mety tsy hahomby amin'ny fikatsahany antoka mba hahay hiasa, hakingana ary hifaninana amin'ny vanim-potoana aorian'ny COVID-19.
Ny fahafahan'ny mpilalao amin'ny sehatry ny fizahantany manerantany hifanaraka amin'ny fiantraikan'ny areti-mandringana dia tsy isalasalana fa nanampy tamin'ny teknolojia nomerika.